ကျောက်ခေတ်အရောင်ဆေးသုတ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
အဆိုပါဆေးသုတ်၏အဘယျသို့သောဖြစ်ပါသည် ကျောက်ခေတ်အရောင်ဆေးသုတ်? ဥရောပ, အမေရိကနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံများပြီးသားတွေအများကြီးခြယ်သကြ ကျောက်ခေတ်အရောင်ဆေးသုတ် အဆောက်အဦး၏အတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်ဘက်နံရံတွင်။ သင်ကအလွန်သံသယဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါသလား? သောကြောင့်များစွာသောလူအတွက် Taiwan အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး ကျောက်ခေတ်အရောင်ဆေးသုတ် ဖြစ်သနည်း အဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းရိုးကိုသည်ကျောက်ကိုလေပေါ်မှာပမှမဟုတ်ပါဘူး, သင်တန်းမပေး, ထို့နောက်ကားအဘယ်သို့ ကျောက်ခေတ်အရောင်ဆေးသုတ်? ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုသင်ပြောပြပါရစေ။
နံရံများ decorating များအတွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။ ကျောက်များရွေ့လျား၏လုပ်ရတဲ့မပါဘဲသဘာဝအလျောက်ကျောက်အရောင်နဲ့ခံစား Create! မြို့ရိုးအရွံရှာဘွယ်သောရောနှောသောကျောက်အရောင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်သရန်အဘို့အကအားလပ်ရက်အပန်းဖြေသို့မဟုတ်ခေတ်သစ်စတိုင်လ်ဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကဘုံဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, နေသမျှကာလပတ်လုံးအထူးရောင်စုံဆေးသုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်အဖြစ်အမှန်တကယ်ကျောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ထိုအာကာသအဆုံးမဲ့ကြွယ်ဝသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ဤသည်ကျောက်ရိုးသာတည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်လည်း
တစ်ဦးအကြမ်းခံဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်, ကျောက်ကို၏ texture အိမ်များအတွက်ခိုင်မာသောကျက်သရေဖန်တီးနိုင်!
ပုံစံ - 4-4
သစ်ကုလားအုတ်အဆောက်အအုံ'2012 ခုနှစ်တွင် s ကိုအပြင်ပန်းနံရံ,ကျောက်သုတ်နှင့်အတူခြယ်သ,ယခုတိုင်အောင်အသစ်ကလိုပဲ
နီipponကျောက်ရောင်စုံဆေးသုတ်ဆေးသည်အပူချိန် ၈၀၀ ရှိသည့်ဆေးခြယ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်°1200 မှကို C°ဂ.သဘာဝထိပ်တန်းကြိတ်ခွဲထားသောကျောက်နှင့်ကြွေထည်မြေထည်များပိုလီမာများသည်ကျောက်လွှာများနှင့်သဲကျောက်အင်္ကျီများထဲသို့ပေါင်းစပ်ထားသည်.ပစ္စည်းများ၏ထိတွေ့မှုနှင့်ခံစားမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်,နှင့်အလှဆင်ခြင်းနှင့်အကာအကွယ်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်.အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု;ဟုတ်လား'ကြမ်းတမ်းသော texture မှဒဏ်ငွေအထိ,ချောချောမွေ့မွေ့,သို့မဟုတ်ပင်ပြားချပ်ချပ် texture အလွှာ,ကျောက်'အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်.
*သဘာဝ 3D ရောင်စုံကျောက်သားပန်းပုအကျိုးသက်ရောက်မှု
ကျောက်သုတ်ဆေး function ကိုအားသာချက်များ
ကျောက်သုတ်ဆေးသည်မီးခံပစ္စည်းဖြစ်သည်,ရေစိုခံ,အက်စစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.မဟုတ်-အဆိပ်,အနံ့မရှိ,အားကြီးသောကော်,ဘယ်တော့မှမပျောက်ပါဘူး,ရောင်စုံ,စသည်တို့.,ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအဆောက်အအုံများပျက်စီးစေပြီးအဆောက်အ ဦး ၏သက်တမ်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်.နိပွန်ကျောက်ဆေးသည်အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာရှည်နိုင်သည်,နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်.၎င်း၏ကောင်းမွန်သောကော်နှင့်ခရမ်းလွန်ခုခံမှုကြောင့်,ရောင်စုံဆေးသုတ်ခြင်းသည်အပူပိုင်းဒေသများတွင်အသုံးပြုရန်အထူးသင့်တော်သည်.နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အားသာချက်မှာဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးဖြစ်သည်.